उदयपुरकाे क्वारेन्टाइनमा घट्याे सबैकाे मुटु हल्लिने दुखद घटना, कसरी भयाे यस्ताे ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/उदयपुरकाे क्वारेन्टाइनमा घट्याे सबैकाे मुटु हल्लिने दुखद घटना, कसरी भयाे यस्ताे ?
उदयपुरकाे क्वारेन्टाइनमा घट्याे सबैकाे मुटु हल्लिने दुखद घटना, कसरी भयाे यस्ताे ?
रौतामाई । उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका–१ मुर्कुचीस्थित जनता क्याम्सको क्वारेन्टाइनमा राखिएका १ युवकले बुधबार राति आफ्नी श्रीमतीको सलले घाँ,टी,मा बे,रे,र आ’त्मह’त्या गरेका छन् ।
आ’त्मह’त्या गर्नेमा सोही गाउँपालिका–७ गुराँसेका १९ वर्षीय सुमन विक रहेको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार खड्काले बताए केही दिनअघि श्रीमतीसँगै काठमाडौँबाट घर आउने क्रममा विकलाई जनता क्याम्स मुर्कुचीको क्वारेन्टाइनमा राखिएको रौतामाई गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
श्रीमतीको सल निकालेर भित्ताको र,ड,मा बाँ,धी घाँ’टीमा बे’रेर विकले आ’त्मह’त्या गरेको खुल्नमा आएको अध्यक्ष खड्काले बताए । अध्यक्ष खड्का अनुसार, अहिले जनता क्याम्सको क्वारेन्टाइनमा विकको सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम शुरु भएको छ । विक र उनकी श्रीमती काठमाडौं चाबहिलमा बस्दै आएको र पोखरा–काठमाडौँ ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने गरेका थिए ।
उनलाई वैशाख ११ गतेदेखि रौता जनता क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । प्रहरी चौकी मुर्कुचीका प्रहरी टोलीले सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम भइरहेको र विकका आफन्तलाई पनि घरबाट झिकाउने काम भएको अध्यक्ष खड्काले बताए । विकले आ,त्म,ह,त्या किन गरे भन्नेबारे केही खुल्न नसकेको उनले बताए ।इमान्दार संवाददाता
५० रुपैयाँ दिएर १५ वर्षिया किशोरी ब’ला’त्कार गर्ने ६८ वर्षीय बृद्धले घटना मिलाउन दिए १० लाख !
भर्खरै आयो ठुलो दु’खद खबर काठमाडौंमा घ’ट्यो अर्को ड’रलाग्दो घ,टना